Chelsea oo Bank-geeda Janaayo u jebin doonta Marouane Fellaini. - Caasimada Online
Home Warar Chelsea oo Bank-geeda Janaayo u jebin doonta Marouane Fellaini.
Chelsea oo Bank-geeda Janaayo u jebin doonta Marouane Fellaini.
Milkiilaha Chelsea Roman Abramovich ayaa diyaar u ah inuu Bank-ga u jebiyo ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Everton Marouane Fellaini, isagoo Janaayo ku dalban doona 30 milyan oo ginni. Sida uu qoray wargeyska Sunday People.
Xidiga dalka Belgium ayaa si aad ah uga dhex muuqday kooxda David Moyes wuxuuna dhaliyey lix gool xilli ciyaareedkaan isagoo goolkiisii ugu dambeeyey shabaqa kasoo taabsiiyey sabtidii kooxda Sunderland oo marti ugu aheyd Goodison Park Stadium.
Hadaba maalqabeenka u dhashay dalka Ruushka ee iska leh Chelsea ayaa isha ku haya inuu Fellaini keeno gegeda Stamford Bridge si uu ugu kabo qadka dhexe ee Blues.
Tababaraha Chelsea Roberto Di Matteo ayaa doonaya in kooxdiisa dhiig cusub lagu soo daro marka Janaayo uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, wuxuuna 24 jirkaan u arkaa mid dabooli kara baahida qadka dhexe ka heysata Chelsea.
Saxiixiisu midda kale ee uu faa’iidada ku leeyahay waa dhirikiirka waana ciyaaryahan dhirirkiisu yahay 6ft iyo 4inches kaasoo sidoo kale ku fiican kubada dhaadheer iyo koontaroolka. Wuxuuna leeyahay awood uu kubada ku xajisto.
Chelsea ayaa horay ula soo saxiixatay Eden Hazard, Oscar, Victor Moses, Marko Marin iyo César Azpilicueta waxaana ku baxay aduun dhan 79.5 milyan oo ginni, tiiyoo ay hada wadada ugu jirto Fellaini.